Shiinaha Warshadda Tooska ah ee Tayada Sare ee Dibadda Qalabka Korantada ee Korantada ee Korantada Smart Plug Wifi UK soo saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha. SNOPE
Xakamaynta APP Remote: Ka shid / demi korantada meel kasta oo taleefankaaga casriga ah leh barnaamijka Meross. Waad iska hubin kartaa inaad aragto xaaladda aaladaha ku xiran meel kasta oo aad doonto. Dhammaan xogta si ammaan ah ayaa loo gudbiyaa loona kaydiyaa iyadoo la adeegsanayo server-yada AWS ee Mareykanka.
Xakamaynta Codka: Qalabkaaga si xor ah u xakamee, kaliya samee amarro cod si aad u daarto / u darto qalabka ku xiran. La jaan qaadi kara Amazon Alexa, Kaaliyaha Google iyo SmartThings. HA taageerin Apple Homekit. Fadlan hoos u rog oo ka hubi "Tilmaamaha Farsamada-Tilmaamaha Isticmaalaha" si aad u aragto habka qaabeynta ugu dambeysay.
Xiriir la isku halleyn karo: Isla Chipset Alaab-qeybiyaha oo leh Echo. Meross smart plugs wuxuu la shaqeeyaa Mediatek Iot chipset kaas oo siiya Chipset-ka Amazon Echo smart smart. Chipset awood leh ayaa awood u siiya melo wifi fiilooyinka si aad uga wanaagsan kuwa kale. Awood u leh isku xirnaanta WiFi dheer iyo heerka ka-goynta ka hooseeya inta badan tartamayaasha.
Jadwalka iyo Jadwalka Jadwalka: Waxaad jadwal u sameyn kartaa qalabka ku xiran si aad toos ugu daarto una dansato. Faa'iidada dheeriga ah ee keydinta tamarta marka nalalka aan loo baahnayn ama shilalka looga tago. Taageer qorrax soo baxa iyo qorrax dhaca.
Tayada iyo Adeegga: Qalabka korontada ku shaqeeya wuxuu ka samaysan yahay walxaha ololka PC, waxaa loo oggolaaday badbaadada iyo hubinta tayada. Waxaa shahaado siiyay ETL iyo FCC gudaha USA. Oo waxay taageertaa qalab kasta oo guriga ah illaa 16A. Dhibaato kasta, fadlan si xor ah ula soo xiriir annaga oo aan ka labalabeyn oo aan xal u heli doonno illaa aad ka qanacsan tahay.
Shahaadada FCC / ROSH
Lambarka Moodalka SNW-201
Hore: Soosaaraha Qiimaha Warshadda Meter Power Statistics Digital Wifi Smart Plug 16A UK Plug Mini
Xiga: Tirakoobka Xoogga Sare ee Mashiinka Tamarta Tooska ah ee Smart Wifi Plug
Sale Hot Factory US UK EU 6A 100-240 Volt Smart ...
Warshad sameeyey 100-250V 3USB + Nooca-C Eu bareesada Powe ...